Firenena 10 ambony manana tahirim-bola vahiny lehibe indrindra any Afrika 2022 - Victor Mochere
Ny tahirim-bola vahiny, antsoina koa hoe tahiry forex, dia, amin'ny heviny henjana, fa tahiry vola vahiny ihany no tazonin'ny banky foibe nasionaly sy ny manampahefana ara-bola. Na izany aza, amin'ny fampiasana malaza dia misy ihany koa ny tahirim-bolamena, ny zon'ny fisarihana manokana (SDRs) ary ny toeran'ny tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) satria io tarehimarika io, izay matetika antsoina kokoa hoe tahiry ofisialy na tahiry iraisam-pirenena na tahiry iraisam-pirenena ofisialy, dia mora azo kokoa ary azo lazaina fa misy dikany kokoa.
Ireo petra-bola vahiny ireo dia fananana ara-bolan'ny banky foibe sy ny manampahefana ara-bola izay tazonina amin'ny vola tahiry samihafa (ohatra ny dolara amerikana, ny Euro, ny Yen Japoney, ny Yuan Shinoa (renminbi), ny Franc Swiss ary ny Pound Sterling. ) ary ampiasaina hamerenana ny andraikiny (ohatra ny vola eo an-toerana navoaka sy ny tahirim-bola isan-karazany napetraky ny governemanta na ny andrim-panjakana amin'ny banky foibe).
Ireto ny firenena 10 ambony indrindra manana tahiry vola vahiny ambony indrindra any Afrika.
Tahiry fifanakalozam-bola vahiny
$ 73.79 lavitrisa
$ 60.91 lavitrisa
$ 54.47 lavitrisa
$ 40.91 lavitrisa
$ 40.66 lavitrisa
$ 35.44 lavitrisa
$ 15.40 lavitrisa
$ 11.40 lavitrisa
$ 8.87 lavitrisa
$ 8.84 lavitrisa